Luis Figo oo ka warbixiyay fikradiisa kaga aadan kooxda Real Madrid uu hogaaminayo tababare Lopetegui – Gool FM
Dajiye September 20, 2018
(Real Madrid) 20 Sab 2018. Halyayga reer Portugal ee Luis Figo ayaa ka hadlay mowduucyo dhowr ah ee la xiriira kooxdiisa hore ee Real Madrid, gaar ahaan tan iyo markii uu ka dhaqaaqay Cristiano Ronaldo.
Luis Figo ayaa muujiyay ayaa muujiyay in Real Madrid ay hormar weyn ka hoos sameesay macalinkeeda cusub ee Julen Lopetegui, isla markaana uu Cristiano Ronaldo kaga dhaqaaqay kooxda Juventus.
“Cristiano Ronaldo wuxuu ahaa ciyaaryahan aan caadi ahayn joogi taankiisa kooxda Real Madrid lakiin noloshu waa inay socotaa”.
“Lakiin waxaan qabaa in ciyaartoyda haatan ku sugan kooxda Real Madrid ay sidoo kale qori doonaan taariikh cusub, waxay awoodaan in mustaqbalka ay ku guuleystaan koobab”.
“Real Madrid si fiican ayay u ciyaareysaa xiligan la joogo, waana inaan ku faraxnaa, Los Blancos waa kooxda heysata Champions League waxayna isku dayi doontaa inay difaacato”.
“Kaarkii casaanka ahaa ee Cristiano Ronaldo wuxuu ahaa mid ka badbadis ah, mana filiyo inay jirtay xaalad muuqata uu ku qaadan karay kaarka roosaha, ma garanayo waxa uu arkay garsoorka ciyaarta, laakiin way adagtahay in laga falanqeeyo TV-ga”.
Wargeyska Guardian oo si hordhac ah u sheegay ganaaxa la filayo inuu maridoona Ronaldo kadib roosihii tooska ahaa uu xalay qaatay